उज्यालो फोकस | Ujyaalonetwork.com
म बिरामी होइन, मलाई अबको २०/२५ वर्षसम्म केही हुँदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको २०/२५ वर्षसम्म आफूलाई केही नहुने बताएका छन् । सिंगापुर उपचारको क्रममा आफूलाई डाक्टरले भनेको कुरालाई उदृत गर्दै शुक्रबार बिहान भेट गर्न आएका झापा ५ नं निर्वाचन क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताहरुसँग भने, गत हप्ता सिंगापुरमा आँखा,कान,घाँटी र बुढी औंलादेखि कान्छी औंलाका नङसम्म परीक्षण गरेर आएको छु । डाक्टरले सबै अंग […]
अध्यापन अनुमति पत्रको परिक्षा मिति तोकियो, गलत उत्तरको २० प्रतिशत अंक कट्टा गरिने
भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको परिक्षा मिति तय गरेको छ । आयोगले एक सुचना जारी गर्दै अध्यापन अनुमति पत्रको मिति तयर गरेको हो । तय भएको मिति अनुसार परिक्षा बिहान ८ बजेबाट शुरु हुनेछ । सुचना अनुसार प्राथमिक तहको परिक्षा आगामी असोज ०९ गते हुनेछ । त्यसैगरी माध्यमिक तहको असोज १० र […]
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् ‘हेग लगे भने त म झन् विश्वकै हिरो भएर निक्लिन्छु’
Posted on July 29, 2019 Author : उज्यालो प्रतिनिधि
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेग पुर्याए आफू विश्वकै हिरो बनेर निस्किने दावी गरेका छन् । ‘कतिपयले प्रचण्डलाई हेगमा लैजाने रे, एक दिन भए पनि जेलमा हाल्ने रे भनेर प्रचार गरिएको सुनेको छु, हेग लगे भने त म झन् विश्वकै हिरो भएर निक्लिन्छु,’ प्रचण्ड भन्छन्, ‘तर यिनीहरुले […]
क्रमभंगतामा ऊर्जामन्त्री पुन, सय वर्षजतिको काम एकै वर्षमा
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले कार्यभार सम्हालेपछि २०७५ वैशाख २५ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरे । नेपालको विद्युत् उत्पादनको अवस्था हेर्दा मन्त्रीको घोषणा महत्वकांक्षी थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । महत्वाकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री पुनसामु नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने चुनौती […]
स्कुल विभागमा घनश्याम भुसालको सम्भावना कति ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शक्तिशाली मानिने स्कुल विभागको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नेकपाको एकता प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले तर्फबाट इश्वर पोखरेल र माओवादीको तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठको यो विभागमा प्रमुख दावी छ । पोखरेललाई नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थन छ भने श्रेष्ठलाई अध्यक्ष […]
आफ्नै श्रीमतीलाई दीपक देवकोटाको पत्र, ‘अरु जे होस्, मेरो पसिनाको मूल्य फिर्ता देऊ’
Posted on July 25, 2019 Author : उज्यालो प्रतिनिधि
प्रिय मनिषा मीठो सम्झना तिम्रो नाममा कोरिरहेको यो पत्र कसरी सुरु गरुँ, आफैँ दोधारमा छु । यो कुनै प्रेम पत्र होइन कि यसमा मायाका कुराहरु हुनेछ । यो त केवल आग्रहपत्र हो, जसमा तिम्रो नाममा मैले आफ्ना मनका बहहरु पोख्दैछु । मनिषा, तिमी मैले माया गरेको मान्छे । अनि, म तिमीले माया गरेको । एक–आपसमा […]
पूर्वएमालेबाट नेकपाको शक्तिशाली विभागमा यी नेताले पाउने भए जिम्मेवारी
Posted on July 19, 2019 Author : उज्यालो प्रतिनिधि
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पूर्व एमालेले पाउने शक्तिशाली विभागहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड सकिएको छ । पूर्व एमालेका नेताहरुबीच बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार कुन विभाग कसले लिने भन्ने सहमति भएको हो । सो सहमति अनुसार सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले संगठन विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् भने, ईश्वर पोखरेलले स्कूल विभागको जिम्मेवारी लिनेछन् । त्यस्तै वरिष्ठ नेता […]
माओबारे थाहा पाउनैपर्ने यी कुरा, पढ्ने कि ?
Posted on July 17, 2019 Author : उज्यालो प्रतिनिधि
त्यो बेला चिनियाँ जनता निकै गरिब थिए । गाउँले त झनै दरिद्र । लगाउन एकसरो लुगासम्म हुन्नथ्यो । काम गर्न जाँदा जमिन्दार परिवारले दिई पठाएको फाटेको र लगाइसकेको पुरानो लुगा लगाउन विवश थिए । माओ पनि गाउँले नै, त्यसैले दश ठाउँ टालेको लुगा लगाउन मन पराउँथे । गाउँलेले अरु बेला नसके पनि चाडपर्वको बेला वर्षमा […]
होटलमा युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा सुर्खेतका ताराप्रसाद खत्री पक्राउ
Posted on July 11, 2019 Author : उज्यालो प्रतिनिधि
काठमाडौं । गत बिहीबार बसुन्धरास्थित एक होटलमा साँझ ७ बजेको समयमा पोखराकी उमा मगर (नाम परिवर्तन) लाई बलात्कार गरेको आरोपमा सुर्खेतका ताराप्रसाद खत्री पक्राउ परेका छन् । ती युवतीले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर महाराजगञ्जमा उजुरी दिएकी थिइन् । ती युवती आफूलाई न्याय दिलाउँछु भन्दै उल्टै खत्रीले बलात्कार गरेको भन्दै समाचार प्रकाशन गर्न […]
करोडौँ रुपियाँ ठगेर फरार भए ‘पिटर सुवास खड्का’ (भिडियो रिपोर्टसहित्)
Posted on July 9, 2019 Author : उज्यालो प्रतिनिधि
अनिस तामाङ/ काठमाडौं जिल्ला तार्केश्वर नगरपालिका वडा नं. २ जरंखु निवासी पिटर सुवास खड्काले विभिन्न व्यक्तिहरुबाट करोडौँ रुपियाँ ठगि गरेको प्रमाण फेला परेको छ । जग्गा कारोबारमा संलग्न खड्काले दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरुमार्फत् करोडौँ रुपियाँ ठगि गरेको प्रमाण फेला परेको हो । पिटरले काठमाडौंमा आकर्षक घडेरी मिलाउन भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरुमार्फत् करोडभन्दा बढी बयाना लिएर ठगि गरेका […]
ज्योतिषीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने सांसदमा माग
छोरा जन्माउने आशामा १३ सन्तान
सिंहदरबारभित्रै एक कर्मतारी मृत अवस्थामा फेला
अमिताभ बच्चनको कलेजो ७५ प्रतिशत खराब, देखिन्छन अझै फिट
उत्तर कोरियाले परीक्षण गरेको क्षेप्यास्त्रले अमेरिकालाई कुनै खतरा नहुने
घाइते मेस्सी के गर्दैछन् त, के दोश्रो खेलमा फर्केछन् त ?
टुँडिखेललाई व्यवस्थित गर्नै
सेवक नेपालले मन्त्री दुलालसँग माग्यो माफी